आज दाहाल-नेपाल समूहले देशभर विजय जुलुस गर्दै - नेपालबहस
आज दाहाल-नेपाल समूहले देशभर विजय जुलुस गर्दै
१२ फागुण २०७७ | ८:२३:२९ मा प्रकाशित
१२ फागुन, काठमाडौं । नेकपा दाहाल नेपाल समुहले आज देशभर विजय जुलुस गर्दैछ । नेकपाको केन्द्रीय संघर्ष समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको खुशियालीमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभर विजय जुलुस गर्न लागेको हो ।
काठमाडौंमा हुने विजय जुलुसलाई नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिए । विजय जुलुस भने रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा हुनेछ । शान्तिबाटिकाको जुलुस मध्यान्ह १२ बजे सुरु हुनेछ ।
यस्तै देशभरका जिल्ला सदरमुकाममा पनि विजय जुलुस हुनेछन् । बिहान ८ बजेपछि नै जिल्ला सदरमुकाममा विजय जुलुस सुरु हुने रिजालले बताए । गएको पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । जसलाई मंगलबार सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ ।
त्यसपछि ओलीबाट अलग्गिएको दाहाल-नेपाल समूहको नेकपाले देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएको थियो ।
झमेला झेल्दै संसद बैठक, २३ गते के हाेला संसदमा ? ८ घण्टा पहिले
नेकपा नेता पन्तविरुद्ध कोमल वली अदालत जाने १० घण्टा पहिले
ओली हटाउने सजिलो याे बाटो, किन छानेनन् प्रचण्ड–माधवले ? ११ घण्टा पहिले
विदेशमा यो साता कोरोनाबाट थप ३ जना नेपालीको निधन : एनआरएनए १२ घण्टा पहिले
गायक शिबहरी थापाको जब टाडा गयौ तिमी सार्वजनिक १४ घण्टा पहिले
अभियानकर्ताले दिए काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि धर्ना १० घण्टा पहिले
गृहले गर्‍यो ५२ जना सीडीओहरुको सरुवा, काे-कहाँ ? २ दिन पहिले
चौकीटोलमा सुमो दुर्घटना हुँदा ११ जना घाइते ६ दिन पहिले
जेठको दोस्रो साताभित्रै एसईई सक्ने तयारी ५ दिन पहिले
एयर इन्डियाको विमानबाट १० लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्यो ७ दिन पहिले
अस्ट्रेलियामा ९० ह्वेलको मृत्यु, अलपत्र १८० को उद्धारका लागि प्रयास जारी ५ महिना पहिले
हिमपातमा कमी आउन थालेपछि स्थानीयवासी चिन्तित १ महिना पहिले
नेकपा र कांग्रेस बाहेक १२ जना उम्मेदवारको जमानत जफत १ वर्ष पहिले